Imizuzu emi-5 yokuzithemba kweGeoCivil -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Imizuzu ye5 yokuzithemba kwiGoCivil
Imizuzu ye5 yokuzithemba kwiGoCivil
I-GeoCivil ibhlog enomdla ejolise ekusebenziseni izixhobo ze-CAD / GIS kwindawo yoBunjineli boLuntu. Umbhali wayo, indoda yelizwe lase-El Salvador, ngumzekelo olungileyo wokuziqhelanisa namagumbi okufundela emveli--CasiUluntu olufunda kwi-Intanethi; ngokungathandabuzekiyo luphawu olubalulekileyo lokubulela ukunxibelelana kwehlabathi liphela sisiqalo esihle sedemokhrasi yolwazi.
KwiGeoCivil ukusetyenziswa kwe-AutoDesk Civil 3D kulawula, ekuthethwa ngayo kumanqaku amaninzi, kokubhaliweyo nakwiindlela zokwenza izinto. Ukongeza, iinkqubo ezongezelelekileyo ze-AutoDesk ezenza okanye ezenza izinto ezifanayo njengeDesktop yoMhlaba kunye neMephu ye-AutoCAD.
Ndiyishiya izixhumo ezintathu ukuba uqhube, uye khona uze uyongeze kumfundi wakho wokutya.
Indlela yokuqhuba isimiso se-lisp kwi-AutoCAD
Eli nqaku libonisa indlela ulayishe AutoLisp umyalelo kwenziwa ngokusebenzisa nocwangciso ukuba umbhali wenza ukubala kunye neendawo iilebhile akunyanzelekanga ukuba zivalwe komda.
Landa idatha ye-GPS ku-AutoCAD
Oku kuchaza indlela yokukhuphela idatha kwi-Etrex GPS kwi-AutoCAD, usebenzisa inkqubo yeMaphuSource.
Ukwahlula isalathisi esingaqhelekanga nge-AutoDesk Civil 3D
Nantsi ividiyo yokwahlulahlula ibali elinomfanekiso "L" ngelixa uhlonipha indawo ethile yesiza. Impendulo enomdla isekwe kumbuzo ovela kuluntu lwaseAugi, xa wayesaphila.
Kwaye ekugqibeleni, phawula amanqaku amabini malunga nokuphathwa kwedatha yezolimo kunye ne-Civil 3D:
Yakha ubuso ukusuka kwifayili yendawo
Uluhlu lweSaveyi, ukukhuphela idatha yeepographic data kwi-AutoCAD
Ndisebenzisa ithuba lokugcwala kwabantu ngoMvulo, ngendlela ehlala ilungile, ukukhuthaza eli nyathelo kwaye ndilishiye kuluhlu lweebhlog endizicebisayo. Ukuba into oyifunayo kukufunda kumntu oyincutshe kwi-Civil3D, ngaphandle kwamathandabuzo iGeoCivil yindawo leyo.
Yiya kwi GeoCivil
Yongeza iGoCivil kwiGoogle Reader
I-Geomap kunye nekhonkco kunye neemephu zikaGoogle
Ifomathi entsha ye-InfoGEO kunye ne-InfoGNSS kumagazini
MARINO BAUTISTA HINOSTROZA uthi:
Molo sithandwa sam, ndisebenza kakhulu ne-AUTODESK CIVIL 3D kwaye ndinedatha kwindawo endifuna ukuyibeka kuyo ukuze umfanekiso ungacacanga, kuyakubakho umyalelo wokuwusebenzisa kwaye ube nokucaca okukhulu komqondiso kwi-GEOLOCATION kune-3D yoluntu.
NAKUBA NGOKUBA UTHENGA IMPENDULO
Ndiyabulela othandekayo wam, ndinguye ogcina i-geocivil, kwaye kuyimbeko ukuba ubhala le nqaku malunga neblogi yam; Enyanisweni i-geofumadas ibe ngumthombo kunye nokuphefumlela kwam, kwaye ndikubonisana nawe rhoqo.
Template ukwenza ifayile DXF ukusuka kuluhlu Excel lamanqaku